A Brief Update History of iPhoto
Na 2002, iPhoto rutere dị ka dijitalụ foto mkpachapụ ngwọta si Apple maka Mac onye kọmputa. Apple ọrụ, bụ ndị na-ele anya maka a pụrụ ịdabere na otu ezigbo foto na dijitalụ media management software, mesịrị ohere ihe na-ụlọ foto management na-edezi ngwa na ha nwere ike iji mbubata, ịzọpụta, hazie, dezie, òkè na ibipụta dijitalụ oyiyi. Dị ka functionalities nke iPhoto bụ nchegbu, ọ bụ mgbe tụnyere amasị nke Picasa si Google, na Photo Gallery sitere na Microsoft, Adobe Photoshop album na Media One si adọ One. Kemgbe ọtụtụ afọ, foto mkpachapụ software natara ọtụtụ ịrịba mmelite, na agbanweela ọtụtụ mgbanwe (ma nkeji na isi) ka mgbe niile izute image edezi na emeghari chọrọ. Mbụ na nanị wepụtara maka na Mac OS X, software rutere dị ka a free ngwa na Apple si website mgbe ọ akpọrepu n'afọ 2002.
Biko Họrọ A Year
Year nke ntọhapụ: 2002
Sistem: Mac OS X 10.1
Details: The mbụ na ihe ndị kasị mkpa version nke ngwa kwere ọrụ iji ngwá ọrụ iji hazie ma na-eso dijitalụ foto site na email, kpatụ iche na ihie etoju nke ihe oyiyi ahụ, na-ejigide igwefoto na oyiyi ozi maka foto ọ bụla, ibubata foto site CD, ike a foto album site na-adọkpụpụta oyiyi ka Photo n'ọbá akwụkwọ na ndị ọzọ. E wezụga, ọrụ e kwere ka ọbụna ịtụ ọkachamara Mbipụta nke ha họọrọ oyiyi si Kodak, ma ọ bụ ịtụ a Azụ siri ike akwụkwọ nke ihe oyiyi n'ime iPhoto. A pụrụ ịdabere na mbụ gen foto mkpachapụ ngwọta n'ezie.
Year nke ntọhapụ: 2003
Details: Na a version nke foto edezi software, ọrụ àmà mwekota nke ngwa na iLife - na ụlọ nke media centric ngwa si ​​Apple. Wepụtara na San Fransisco na Macworld Expo, na iLife ụlọ e wepụtara na gụnyere maka niile nsụgharị nke Mac ịwa usoro site mgbe ahụ. The ụlọ gụnyere ngwa dị ka iMovie, iDVD, iTunes na iPhoto. The foto edezi software e wepụtara ka a standalone ngwá ọrụ dị ka mma. The version nke ngwá ọrụ kwere ọrụ ịkọrọ dijitalụ oyiyi, ike slideshows na ndabere music na iDVD, seamlessly Archive photos, gbagote na okike ụzọ nke na-eweta ihe oyiyi site na-agbakwụnye ederede ma na-eso ha ndị enyi na ezinụlọ dị ka mma.
Azụ ka top
Year nke ntọhapụ: 2004
Sistem: Mac OS X 10.2.6
Details: Nke a version nke iPhoto kwere ọrụ iji na-aghọgbu ihe oyiyi na onye ozi na ndị ọzọ iLife ngwaọrụ. Ọrụ ike ugbu a na-agụnye ọdịyo egwu kere iji GarageBand, tinye cinematic na jụụ ikwu n'ụzọ na video mmetụta, hazie foto mma, òkè photos seamlessly na ndị ọzọ.
Year nke ntọhapụ: tọhapụrụ na ntarama afọ malite 2005 ka 2009
Sistem: Mac OS X 10.3.4 (iPhoto 5), OS X 10.4.3 (iPhoto 6), OS X 10.4.9 (iPhoto 7), OS X 10.5.6 (iPhoto 8)
Details: n'etiti 2005 na 2009, ndị Cupertino dabeere tech ibu ntarama nsụgharị nke iPhoto, na onye ọ bụla na-anata upgrades na okwu nke functionalities na onye ọrụ interface. Onye ọ bụla software showcased ụfọdụ iche atụmatụ na ndozi si ya ụzọ, ma nyefee mma afọ ojuju na usability ọrụ.
Year nke ntọhapụ: 2010
Sistem: Mac OS X 10.6.3
Details: The iPhoto ngwa bụ, na 2010, a tọhapụrụ dị ka akụkụ nke niile ọhụrụ iLife '11 ụlọ na-eme kwa afọ Apple omume. The agbanwewokwa echiche foto edezi ngwa kwere ọrụ Email oyiyi iji gburugburu na gosiri mma mwekota na Social media dị ka Facebook, ma ọ bụ tinye ihe oyiyi na-a ngosi mmịfe nke 12 ndebiri. Dị ka a standalone ngwa dị ka nke ọma, ngwá ọrụ na-showcased atụmatụ dị ka ihuenyo zuru ụdịdị na-ọdabara maka ihe, ebe ndị na-ihu. Ọzọkwa, ọ nyere iche ụzọ ike photobooks na kaadị dị ka mma.
Year nke ntọhapụ: 2013
Sistem: Mac OS X 10,9
Details: Released n'afọ 2013, na iPhoto 9.5 bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọkaibe nsụgharị nke foto edezi ngwá ọrụ. The niile ọhụrụ ngwa n'ihi na Mac ọrụ na-akwado ihuenyo zuru ikiri na edezi, showcases mma mwekota na Social media weebụsaịtị dị ka Facebook na Twitter, awade mma mmepụta nhọrọ dị ka email, na-ebipụta na ndị ọzọ. E wezụga na, na ngwá ọrụ na-akwado Histogram edezi ka n'ihu hụchaa ihe oyiyi, na-arụ ọrụ mma na Raw image faịlụ dị ka mma. E wezụga nke a, ngwa na-atụmatụ ọtụtụ aghụghọ mgbanwe site ya ụzọ na okwu nke onye ọrụ interface, functionalities na amasị.
The iPhoto bụ eleghị anya otu nke kasị mma foto n'ịhazi na emeghari ngwa n'ihi na Macintosh ịwa usoro. Dị ka ọ na-aga n'ihu, ka ha webata, ngwa bụ n'aka na-anapụta kacha foto edezi ike na-na pa na ngwá ọrụ ndị ọzọ na nyiwe.
Olee ka ihichapụ junk faịlụ na Windows / Mac / Android / iPhone
SourceTec Software: Ihe Mere maka Mac
CopyTrans maka Mac - na Best Ngwá Ọrụ nyefee Music, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Videos
> Resource> Mac> A Brief History of iPhoto